Fashionable Anitta’s costumes in “Me Gusta” – Part2– Ariel's Style
Be Chic Be Unique | Just another Ariel Thi site
Home Blog Editorial Article Blog Fashionable Anitta’s costumes in “Me Gusta” – Part 2
Blog Editorial Article Blog
by Carlos Mooreupdated on 05/12/2020 05/12/2020 LeaveaComment on Fashionable Anitta’s costumes in “Me Gusta” – Part 2
Anitta’s costume by Stylist “Janelle Renee”
“Janelle Renee” ဟာ ဖက်ရှင် stylist တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဖက်ရှင် အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် မော်ဒယ် “Khloe Kardashian” ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့ ဆယ်လီ stylist တစ်ယောက်အနေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဖက်ရှင်ဖန်တီးရှင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ “Anitta” ရဲ့ “Touch me” သီချင်းဗွီဒီယိုနဲ့ လက်တင်ဂရမ်မီဆုပေးပွဲတွေမှာလဲ stylist တစ်ယောက်အဖြစ် လက်တွဲခဲ့ဘူးသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“Janelle Renee” က “Me Gusta” သီချင်းဗွီဒီယိုလေးမှာတော့ “Anitta” ရဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်လ်ကို ခွန်အားရှိပြီး sexy ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အသွင်ဖြစ်အောင် animal prints တွေ ၊ textures တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဖန်တီးဝတ်ဆင်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးက ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဝင် ဗိသုကာလက်ရာ ထွန်းကားရာမြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ “Bahia” ပြည်နယ် “Salvador” မြို့မှာရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ဒီမြို့တော်လေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ သမိုင်းဝင်ရောင်စုံအိမ်လေးတွေပါဘဲ။ “Janelle Renee” က သူမရဲ့ဖက်ရှင်စတိုင်တွေမှာ ဒီရိုက်ကွင်းလေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ “Bahia color palettes” တွေကို အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ “Janelle Renee” ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအောက်မှာ “Anitta” ရဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်လ်တွေက ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ကို မပျောက်ပျက်စေဘဲ ခွန်အားလည်းရှိတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်လ်တွေဖြစ်လာပြီး ဘရာဇီးရဲ့ ရှုခင်းအလှတွေကို အချိတ်အဆက်မိမိ ဂီတနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ အရမ်းကြည့်ကောင်းတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုလေးတစ်ခုအဖြစ် အသက်ဝင်လာပါတယ်။ “Janelle Renee” က ဒီလိုစတိုင်လ်ဖန်တီးမှုတွေကို ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာအမှတ်တံဆိပ်တွေကို အသုံးပြုခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ “Anitta” ရဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်လ်လေးနဲ့အတူ ဒီသီချင်းဗွီဒီယိုလေးမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဖက်ရှင်ဝတ်စုံတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
“Janelle Renee” ရဲ့ style guidelines အရ နော်ဝေဒီဇိုင်နာ “Edda Gimnes” နဲ့ပူးပေါင်းဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဝတ်စုံနှစ်စုံမှာ တူညီတာကတော့ ပထမဆုံး အမြင်အာရုံကို ဆွဲဆောင်စေတဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ ဉီးထုပ်ကြီးတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူအမဲကာလာဝတ်စုံကို မျက်နှာဖုံးကာဗာမှာသုံးထားပြီး “Edda” ရဲ့၂၀၁၅ နွေဉီးရာသီ collection မှ ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Bra နဲ့ Flare pant ကိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတာဟာ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေ ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဝတ်စုံတစ်ခုမှာတော့ “Edda” ရဲ့၂၀၁၉ နွေဉီးရာသီ collection ဒီဇိုင်းများဖြစ်ကြတဲ့ floral pattern ဉီးထုပ်နဲ့ ပေါင်ရင်းအထိရောက်တဲ့ ဖိနပ်အရှည်ကို သံပုရာစိမ်းရောင် ရေကူးဝတ်စုံနဲ့တွဲဖက်လိုက်တာကြောင့် “Bahia” ကာလာဖြစ်တဲ့ အစိမ်းရောင်ကို အထူးပေါ်လွင်အောင် အသုံးပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ မိန်းမသားဆန်သော ခွန်အားရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်ကို ပိုမိုထင်ရှားစေ ပါတယ်။
“Janelle Renee” က accessory ဖြစ်တဲ့နားကပ်ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ၊ လော့စ်အိမ်ဂျယ်မှ နာမည်ကြီး အဖိုးတန်ရတနာများထုတ်လုပ်နေတဲ့ “LUNICA Brand” တွင် “Me Gusta” အတွက်အထူးဒီဇိုင်းအဖြစ် ပူးပေါင်းဖန်တီးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဝတ်စုံနဲ့အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ “Bahia” ကာလာကိုအသုံးပြုထားပြီး “Anitta” ရဲ့ စတိုင်လ်ကို ပိုမိုပြီး ကျက်သရေရှိသွားစေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒီ animal print ဝတ်စုံလေးကတော့ အမေရိကန် High fashion brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Tom Ford” ရဲ့ 2018 ဆောင်းဉီးရာသီ collection လေးရဲ့ နံပါတ်( ၃၂)ဝတ်စုံကို “Anitta” ရဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် designer “Tom Ford” က “Janelle Renee” နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ အရောင်နဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဘောင်းဘီကိုလည်း “legging” အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး အမဲရောင်ဘော်လီ ၊ YSL Brand ရဲ့မျက်မှန် ဒီဇိုင်းတို့နဲ့ တွဲဖက်လိုက်တဲ့အတွက် “Anitta” ရဲ့ sexy look စတိုင်လ်ကို ပိုမိုပေါ်လွင်လာစေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒီသီချင်းဗွီဒီယိုလေးမှာ “Anitta” ရဲ့ဖက်ရှင်အတွက် နောက်ထပ်ပူးပေါင်းဖန်တီးတဲ့ ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်ကတော့ အမေရိကန် လူငယ်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ “Oscar Utierre” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဉီးထုပ်လေးကတော့ “Anitta” အတွက် ပထမဉီးဆုံး အထူးဖန်တီးပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ “Janelle Renee” ရဲ့ style guidelines အရ ဒီဇိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“Anitta”ရဲ့ နောက်ဆုံးဝတ်စုံလေးတစ်စုံကတော့ သက်တန့်ရောင်စုံ ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများဖြင့် အပြည့်အဝ ပန်းထိုးထားတဲ့ 3D ဂရပ်ဖစ်၀တ်စုံတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးရဲ့ ဖန်တီးရှင် ကတော့ လက်ဘနွန်ဒီဇိုင်နာ “Jean-Louis Sabaji” ဖြစ်ပြီး 2020 FW couture collection ထဲက နံပါတ်၂၀ မြောက် ဒီဇိုင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးရဲ့ အရောင်မျိုးစုံ ဖြာထွက်နေတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်အသွင်နဲ့ တူသော်လည်း “Anitta”ရဲ့ sexy look နဲ့ မိန်းမသားဆန်သော ခွန်အားရှိတဲ့ဖက်ရှင်စတိုင်က ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း မရှိဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
“Janelle Renee” က ဒီလိုစတိုင်လ်ဖန်တီးမှုတွေကို ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ “Anitta” ရဲ့costume စတိုင်လ်များဟာ “Me Gusta” သီချင်းဗွီဒီယိုလေးအတွက် နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာများနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အထူးဒီဇိုင်းထွင်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်ဝတ်စုံများကို တွဲဖက်အသုံပြုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် မိန်းကလေးများရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေနိုင်မှု နဲ့အတူ ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ကမ္ဘာမှာချပြချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုရဲ့ costume အဖြစ် “Janelle Renee” က ဘရာဇီးလူမျိုးများနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ဖက်ရှင်ဝတ်စုံတွေ အထူးစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း “Anitta”က “Me Gusta interview” မှာပြောကြားခဲ့ကြောင်း တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Tags: AnittaCardi BEditorialJanelle ReneeMe GustaMusic VideoThifashionalliance
Previous ArticleI Told Sunset About You
Next ArticleLook books of Jung Eun Chae in the King: Eternal Monarch
Blog Inspire Your Mind
Blog Capsule wardrobe | Ariel's Style Education look-Book
Get in touch with my using my contact form if you’d like to work together.
603,6floor,6A, Waggi Yake Thar Street, Kamayut,Yangon, Myanmar
Thi’s Fashion Alliance
Article Schdule Date
Editorial Article Blog (17)
Inspire Your Mind (16)
Capsule wardrobe | Ariel's Style (3)
Lookbook/ Capsule Wardrobe (2)
Ariel Thi ( Founder + Director )
We areacurated team of international experts united byasingle goal; to create category-defining Fashion and Style experiences that make an impact, shape culture and connect people.
Thiri Tun (Ariel Thi) Originally from Burma, I’m now live and work in Yangon. I graduated withabachelor’s degree in Philosophy from Dagon University (Yangon). I then obtained diplomas in Fashion Design & Marketing from Regent Academy (Myanmar), and Fashion Design & Illustration from PWFA (Thailand). I also acquiredadiploma in Fashion Image …
Bloglook-BookLookbook/ Capsule WardrobeServicesStyling Tips
Dropdown * Fashion StylingImage ConsultantWardrobe Styling
www.arielthi.com Fashion Stylist | Developed By Blossom Themes. Powered by WordPress.